नेपालमा कोरना भाइरसको डर ह्वात्तै बढ्यो, सरकारले सूचना जारि गर्दै भन्यो, होलि नखेल्नु, मेला महोत्सव रोक्न, ठूला सभा, समारोह र भोजभतेर नगर्नु भन्दै दियो आदेश ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा कोरना भाइरसको डर ह्वात्तै बढ्यो, सरकारले सूचना जारि गर्दै भन्यो, होलि नखेल्नु, मेला महोत्सव रोक्न, ठूला सभा, समारोह र भोजभतेर नगर्नु भन्दै दियो आदेश !
नेपालमा कोरना भाइरसको डर ह्वात्तै बढ्यो, सरकारले सूचना जारि गर्दै भन्यो, होलि नखेल्नु, मेला महोत्सव रोक्न, ठूला सभा, समारोह र भोजभतेर नगर्नु भन्दै दियो आदेश !
चीनबाट शुरु भएर विश्वका विभिन्न देशमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सम्भावित खतरालाई ध्यानमा राखी स्थानीय प्रशासनले उच्च सतर्कता अपनाएको छ । अस्पतालमा विशेष सावधानी अपनाउन, मेला महोत्सव रोक्न, भिडभाड गरेर फागु नखेल्न, ठूला सभा, समारोह र भोजभतेर नगर्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आज बिहान चिकित्सकसँग छलफल गरिएको छ । अस्पतालमा छुट्टै कक्ष (आइसोलेसन रुम) खडा गर्न ठूला अस्पताललाई अनुरोध गरिएको छ । जिल्लाको सरकारी भरतपुर अस्पतालमा र दुई निजी मेडिकल कलेजमा छुट्टै कक्ष निर्माण गरिसकिएको छ । रोगको स’ङ्क्र’मण देखिहालेमा अपनाउनुपर्ने विधि र प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाका सबै अस्पताल सञ्चालक र चिकित्सकलाई तयारी अवस्थामा रहन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ । भट्टराईका अनुसार बुधबारदेखि शुरु हुन लागेको प्रथम परेवाकोट महोत्सव रोकिएको छ । जिल्लामा भइरहेको मेघौली महोत्सव र भरतपुर महोत्सव रोक्ने विषयमा सम्बन्धित आयोजकसँग आजै छलफल गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आजै जिल्लाका सातै स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । उहाँका अनुसार कोरोनाको सम्भावित जोखिमलाई केन्द्रित गरेर उहाँहरुसँग छलफल गरिँदैछ । प्रशासनले आफ्नै कार्यालयका कर्मचारीसँग समेत आज बैठक बस्ने जनाएको छ । रोगको जोखिम हुनसक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आन्तरिकरुपमा छलफल गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले होलीमा ठूलो जमघट नगर्न आम जिल्लावासीलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । विगतका वर्षमा प्रशासनले सूचना जारी गरेर सभ्यतापूर्वक होली खेल्न आग्रह गर्ने गरेको भए पनि यस वर्ष भिडभाडसमेत नगर्न अनुरोध गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै ठूला भोज भतेर नगर्न सबैमा अनुरोध गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा सञ्चारमाध्यमले आम नागरिकलाई बुझाइदिनुप¥यो ।” स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको उच्चस्तरको टोलीले आज भरतपुर अस्पतालको निरीक्षण गरी रोग देखिहालेमा गर्ने तयारीका बारेमा छलफल गर्दैछ । जिल्लामा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका दुई जनाको नमूना परीक्षणका लागि पठाइएकामा दुवै जनाको नेगेटिभ देखिएको थियो ।
नेपालगञ्जमा पार्किङमा राखिएको ट्याङ्करमा करेन्ट प्रवाह हुँदा २२ वर्षीय राजको ज्यान गयो
नेकपामा गम्भीर संकट आउन सक्छ : प्रचण्ड
नेपालकी पुष्पा बस्नेत परिन् प्रेरणादायी व्यक्तित्व सूचीकाे पहिलाे नंबरमा, गोलकास्ट डटकमले भन्यो- ‘आश्चर्यजनक मानव’
महोत्तरीमा भदौ १० गतेसम्म निषेधाज्ञा